Naneho ny heviny mahakasika izay i Imbiky Herilaza, mpitsara sady mpikambana teo anivon`ny CES, ka nilazany fa mila mitandrina ny kandidà sy ireo lohandohan`ny mpisorona. Toy izany koa ireo manampahefana rehetra, indrindra ny vahoaka. Nanambara izy fa mirona amin`ny olona roa izay nifandona tamin`ny taona 2009 no hiatrika ny fihodinana faharoa. Mila mitandrina ny rehetra ka atao ao anatin`ny fitoniana sy firahalahiana daholo ny zavatra rehetra, indrindra ny propagandy. Nomarihany fa tokony handray fepetra ihany koa ny manampahefana amin`ny fampiasana vola tsy mazava fiaviana na tsy ara-drariny. Mila mailo ihany koa eo amin`ny fandriampahalemana satria tsy fantatra izay zavatra mety hitranga any amin`ireny toerana lavitra andriana ireny. Notsipihan`i Imbiky Herilaza fa mila mandray fepetra farany izay haingana raha toa ka misy ny fandikana lalàna eo amin`ny roa tonta. Raha mandeha amin`ny mangarahara sy tsy fitanilana ny fifidianana dia mety hanaiky daholo ireo mpirotsaka hofidiana mahakasika ny voka-pifidianana ary hirariana mba tsy ahatongavana amin`ny korontana maro samihafa, hoy hatrany ny fanazavana.